Waa sidee xaaladda Nice - BBC News Somali
Waa sidee xaaladda Nice
16 Luulyo 2016
Dacwad oogayaasha Faransiiska ayaa sheegaya in weerarkii habeennimadii Khamiista ka dhacay magaalada Nice, ee nin gaari xamuul ah waday uu 84 qof halkaasi ku dilay, uu leeyahay dhammaan calaamadaha weerarrada mintidiinta Islaamiga ah.
Madaxweynaha Faransiiska, Francois Hollande, ayaa saaka shir gudoomin doona kulan looga hadlayo jawaabta uu dalkaasi ka bixinayo weerarkii Nice.
Dhanka kale, aabaha ninkii weerarka fuliyay ayaa BBC-da u sheegay in uu ahaa mid qaba xannuunka dhimirka. Monthir Bouhlel, oo gacanta ku hayay waraaqo muujinaya xaaladda caafimaad ee wiilkiisa ayaa sheegay inuu dawo qaadanayay.
Haddaba magaalada uu weerarka ka dhacay waxaa deggan Musdhaf Aadan Ali. Weriyaha BBC Xasan Cali Geele ayaa khadka taleefoonka kula xiriiray, waxa uuna weydiiyay xaaladda magaaladaasi hadda siduu yahay.